ụgbọelu Ops 3 afọ 5 ọnwa gara aga #88
nọ na-enweta na oge ụfọdụ na-efe efe na Tomcat
ụgbọelu Ops 3 afọ 5 ọnwa gara aga #93
Gbalịa ya na Dino's F-35.
ụgbọelu Ops 3 afọ 5 ọnwa gara aga #94
ị bụ talkin 'na onye Die-Hard Tomcat fanyere, onye na-agbanye F-35 kpamkpam. n'agbanyeghị otú o si mee ya (na nke ahụ abụghị ihe Dino mere ka ọ na-enweta ihe ọma!). Enweghị m mmasị maka F-35 na rl ma ọ bụ egwuregwu lol
ụgbọelu Ops 3 afọ 5 ọnwa gara aga #100
Ọfọn m wuru Ogige Center maka ya, ebe ọ bụ na ọ dịghị F-22 ọ dịtụghị ka ọ bụrụ. Mgbe ndị mmadụ ghọtara na ọ bụ ụzọ isi rụọ ọrụ ahụ dị iche karịa ndị agha agha, ha nwere ike inwekwu ịhụnanya maka ya. Lelee ya n'ụzọ dị otú a, F-15 na-eme ngwa ngwa site na imewe karịa F-22 (n'ihi nlebanye anya na stealth) mana ọ ka dị ala n'ọnọdụ ọ bụla (ma e wezụga nso). B-1A bu ngwa ngwa karia B-1B ma mana B di nma karia uzo ozo. Ya mere mgbe ụfọdụ ị ga-achụ ihe iji nweta ndị ọzọ.
ụgbọelu Ops 3 afọ 5 ọnwa gara aga #103
M agadi ejiji a bit lol m ga-a Tomcat nwoke ruo n'ụbọchị m na-anwụ anwụ. Ugbu a, ka m na-eme ka ọtụtụ Helos .... M kpamkpam n'anya osprey. nke kachasị mma n'ime ụwa abụọ ahụ (nke a na-atụba ịma mma maka ezigbo ihe).
M n'eziokwu n'ejighị oge buru ibu n'ihe ọ bụla ọzọ karịa jumbos lol
Oge ike page: 0.219 sekọnd